IMotorola iqala ukuvavanya iOreo kwiMoto G4 Plus kungekudala | I-Androidsis
Izolo kutyhilwe ukuba yayiyiMoto G5 kunye neG5 Plus eyayifumana i-Android Oreo, kwaye iindaba ziza malunga nefowuni entsha evela kwinkampani. Kule meko yiMoto G4 Plus. Ekuqaleni le fowuni yayingekho kuluhlu lweemodeli ezaziza kufumana uhlaziyo, kodwa uqhanqalazo lwabasebenzisi lwanyanzela inkampani ukuba yenze njalo. Kwaye ngoku, baya kuqala ngovavanyo.
Nangona okwangoku Akukho mihla inikiweyo yokuqala kwezi mvavanyo nge-Android 8.0 Oreo kwiMoto G4 Plus. Kodwa isigqibo senkampani sokuthathela ingqalelo ukuhlaziywa kwefowuni kuyamangalisa, nangona kubasebenzisi benendaba ezilungileyo.
Ukusukela oko kwabhengezwa ukuba ifowuni izakufumana i-Android Oreo, unyaka udlulile. Ukulinda abasebenzisi ngeMoto G4 Plus sele kukudala, kwaye akusoloko kumnandi kwaphela. Kodwa, ukuqala kwezi mvavanyo ubuncinci kunika umqondiso wokuba uza kufika.
Nangona ivelisa amathandabuzo amaninzi ngaxeshanye. Kuba Asazi ukuba olu vavanyo luya kuqala nini, nokuba liza kuthatha ixesha elingakanani enjalo. Ngokusengqiqweni, ukuba yonke into ihamba kakuhle kwaye akukho ngxaki, ziya kuthatha ixesha elincinci kwaye uhlaziyo lunokuhanjiswa kwifowuni ngokukhawuleza.
Nangona isebenza njenge uqinisekiso olongezelelekileyo lwabanini beMoto G4 Plus. IMotorola isebenza kuhlaziyo lwe-Android Oreo, ababashiyanga abasebenzisi ngaphandle kwayo. Kodwa kuya kufuneka balinde ithutyana ukuze bayifumane.
Siya kuzimamela ezinye iindaba ezivela kwinkampani. Ngokuqinisekileyo ekwindla siza kufunda ngakumbi malunga nokuvela kwezi mvavanyo kwaye ukuba kukho nayiphi na i-beta okanye hayi. Banokukhankanya ukuba uhlaziyo kwiMoto G4 Plus kulindeleke ukuba lufike.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Iinguqulelo ze-Android » IMotorola iya kuvavanya i-Android Oreo kwi-Moto G4 Plus
Ayikafikeleli kwi-moto g5s ngaphezulu konyaka emva kokumiliselwa kwayo, ngoku yintoni ethembele kwimoto 4
Kutheni ifowuni yakho ye-Android ishushu?
Amaqhinga okufumana okuninzi kwifowuni yakho ye-NFC